10-ka taleefannada casriga ah ee ugu waxqabadka fiican Ogosto 2020 | Androidsis
Sida caadiga ah, AnTuTu badanaa waxay sameysaa warbixin bille ah ama, halkii, liistada boosteejooyinka ugu awooda badan suuqa, bilba bil. Sidaa darteed, fursaddan cusub waxaan ku tusaynaa bil kasta oo ka mid ah bisha Ogos ee sannadkan, oo ah tii ugu dambaysay ee lagu muujiyo jaangooyada. Aan aragno!
1 Kuwani waa dhammaadka-dhamaadka leh waxqabadka ugu wanaagsan ee Ogosto
Kuwani waa dhammaadka-dhamaadka leh waxqabadka ugu wanaagsan ee Ogosto
Liiskan ayaa dhowaan shaaca laga qaaday oo, sida aan iftiiminno, waxaa iska leh bishii Ogos ee la soo dhaafay, taas oo ah sababta AnTuTu ay u rogi karto tan tan qiimeynta soo socota ee bishan, oo aan arki doonno Oktoobar. Waa kuwan kuwa casriga ah ee ugu awoodda badan maanta, sida ku xusan barxadda tijaabada:
10-ka ugu fiican ee waxqabadka sare leh ee ugu dambeeyay Ogosto 2020
Maaddaama lagu faahfaahin karo liiska aan kor ku soo lifaaqnay, el Xiaomi mi 10 ultra e iQOO 5 waa labada bahal ee ku kala yaal labada boos ee hore, oo leh 646.730 iyo 637.616 dhibcood, siday u kala horreeyaan, iyo farqi u dhexeeya tira ahaan oo aan aad u weyneyn.
Kaalinta saddexaad, afraad iyo shanaad waxa fadhiya Asus ROG Telefoonka 3, Shark Madow 3S iyo Vivo X50 Pro +, oo leh 629.245, 620.311 iyo 608.396 dhibcood, siday u kala horreeyaan, si loo xiro shanta boos ee ugu horreeya liiska AnTuTu. Labadan dambe ee la magacaabay, marka laga reebo ROG Telefoon 3 iyo Black Shark 3S, oo adeegsada Snapdragon 865 Plus sidii labadii hore oo kale, iyaguna way la yimaadaan Qualcomm Snapdragon 865 chipset, Chipset-ka ay isticmaalaan xubnaha kale ee liiska ee aan hadda xusi doonno oo gebi ahaanba barakiciyey Kirin 990 iyo Exynos 990, labadaba Huawei iyo Samsung chipsets, siday u kala horreeyaan.
Ugu dambeyn, qeybta labaad ee miiska wuxuu ka kooban yahay Oppo Raadi X2 Pro (607.276), Oppo Raadi X2 (600.976), Xiaomi Mi 10 Pro (600.618) iQOO Neo 3 (599.955) iyo Redmi K30 Pro (595.738), si isku mid ah, lixaad ilaa tobnaad.
Si ka duwan liistada koowaad, oo ay ku badan yihiin hal jajab, kaas oo ka socda Qualcomm, liiska 10-ka mobilada dhexe ee maanta ugu sareeya oo leh waxqabadka ugu wanaagsan Agoosto 2020 ee AnTuTu waxay leedahay taleefannada casriga ah oo ay la socdaan processor-yo kala duwan oo MediaTek iyo Huawei ah. sidoo kale waxaa ku talaabsaday laba Snapdragon chipsets. Samsung's Exynos, sidii daabacadihii la soo dhaafay, meelna laguma arko markan.
10-ka ugu fiican ee waxqabadka dhexe ee Ogosto 2020
Kadib Redmi 10X 5G, kaas oo ku guuleystey inuu calaamadeeyo shay sare oo gaaraya 396.887 ayna wadaan Cabirka 820 ee Mediatek, Redmi 10X Pro 5G, sidoo kale leh Dimensity 820, ayaa la dhigayaa booska labaad, oo leh dhibco dhan 396.001. Tan waxaa ku xiga Sharaf 30, oo leh dhibco 391.930. Dambe wuxuu la shaqeeyaa kan Kiriin 985.
Taleefannada Huawei Nova 7 Pro, Huawei Nova 7 y Mudane X10 way xaqiijiyeen kaalinta afraad, shanaad iyo lixaad markale, siday u kala horreeyaan, oo leh tirooyin 384.964, 382.845 iyo 362.365. The Sharafta 30S waxay ku jirtaa booska toddobaad, oo sumadeedu tahay 355.741 dhibcood.
Huawei Nova 7 SE iyo Redmi K30 5G ayaa ku jira kaalinta sideedaad iyo sagaalaad, oo leh 358.362 iyo 351.137, siday u kala horreeyaan. Nova 7 SE waa taleefan kale oo casri ah oo ku qalabeysan kan xoogga badan ee Kirin 820, halka Redmi K30 5G lagu bilaabay Snapdragon 768G. Oppo Reno4 4G waa kan ugu dambeeya ee kaliya ee leh Snapdragon 765G.
Noocyada kaladuwan ee Chipset-ka ee aan ka helno liiskan ayaa iska cad. Waxaa jira shan qof oo jooga, Mediatek waa midka maamusha inuu la joogo labada meelood ee hore, sidaasna u siiya Kirin of Huawei, oo leh lix jibbaarane iyo dalool yar oo ku yaal Qualcomm, oo si dhib yar uga dhex muuqday darajadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » 10-ka casriga ah ee ugu waxqabadka fiican Ogosto 2020
Sida loo isticmaalo kaaliyaha Google gaariga dhexdiisa oo aad uga faa'iideysato